Ụlọ Nzukọ Alaeze Ọhụrụ A Rụrụ n’Agwaetiti Nịas | Nwanna Angeragō Hia
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1957
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1997
ONYE Ọ BỤ Ọ laghachiri n’obodo ya n’Agwaetiti Nịas hiwe ọgbakọ.
N’AFỌ 2013, a gwara obere ọgbakọ anyị dị́ na Tugala Oyo na a ga-arụrụ anyị Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ndị ọchịchị ime obodo anyị kwadoro ka a rụọrọ anyị ya. Ndị agbata obi anyị iri isii bịanyekwara aka n’akwụkwọ iji gosi na ha kwadoro ya. Otu n’ime ha gwara anyị, sị, “Unu chọgodị ka narị mmadụ abụọ bịanyere unu aka, ha ga-abịanyere unu ya.”
Mmadụ abụọ na-enyere ndị na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze aka hụrụ maka ọrụrụ ya. A rụchara ya na Nọvemba afọ 2014. Anyị echetụbeghị n’echiche na anyị ga-enwe ebe ọma dị́ otú a anyị ga na-anọ efe Jehova. N’eziokwu, Jehova gọziri anyị karịa ka anyị tụrụ anya ya.
Gịnị mere anyị ji akpọ ebe anyị na-anọ efe Chineke Ụlọ Nzukọ Alaeze? Chọpụta otú ụlọ ndị a si abara ọgbakọ Ndịàmà Jehova uru.